ဘာသာရေး Archives - Online Bunner
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီကိုယ်တိုင်ရွတ်တဲ့ အလွန် အကျိုးပေးသည့်ဂါထာတော်ကြီး….
August 16, 2019 Online Bunner 0
ဈေးရောင်း မကောင်းသူများ၊ လာဘ်တိတ်နေသူများ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများအတွက် ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ကိုယ်တိုင်ရွတ်တဲ့ ဂါထာတော်ကြီး လာဘ် တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်း မကောင်းသူများ၊ အကြွေး မရသူများ၊ အကြွေး မဆပ်နိုင်သူများ၊ ငွေကြေး အခက် အခဲဖြစ်နေသူများ၊ အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင်တို့လို့ တန်း […]
August 15, 2019 Online Bunner 0
မေတ္တာသုတ်ကို နားလည်ပြီးမှ ရွတ်ရတာ ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါ မေတ္တာသုတ် အကြောင်း… ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားသင့်သောမေတ္တာသုတ် ၊ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပွားများခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်မေတ္တာသုတ်ကျင့်သူများ လိုက်နာရန် များကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ် ၁။ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ၊နေ၀ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ယဥှိ စေ၀ါနုယုဉ္ဇန္တော၊ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော။ မေတ္တသုတ်ပရိတ်တော်၏ တန်ခိုးရှိန်စော် […]
အိမ်တွေမှာ အိမ်စောင့်နတ် တကယ် ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေကြားပုံ…
အိမ်တွေမှာ အိမ်စောင့်နတ် တကယ် ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေကြားပုံ ဒေဝတာနံ ကိုယ်မမြင်ရပေမယ့်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်စောင့်နတ်တို့၊ တောစောင့်နတ်တို့၊ တောင်စောင့်နတ်တို့ ဆိုတာ ရှိတယ်။ စောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က Duty ချထားလို့ စောင့်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ကို အမှီပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့ […]
တရားတပုဒ်ကြောင့် အိမ်မှာ ဆွဲထားတဲ့ နတ်အုန်းသီးကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ရဟန်းအမကြီးတစ်ယောက်
August 4, 2019 Online Bunner 0
တရားတပုဒ်ကြောင့် အိမ်မှာ ဆွဲထားတဲ့ နတ်အုန်းသီးကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ရဟန်းအမကြီး အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အရှင်သောပါကနှင့် အရှင်ကုမာရတို့ရဲ့မိခင်ဒကာမကြီးဒေါ်တင်အိဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်း မန်းရွှေမြို့တော်ကြီးမှာစာသင်စဉ်က လိုအပ်သည်များကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဒကာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်တွေအမြဲငှားဖတ်ပါတယ်။ တရားတွေလည်းအမြဲနာပါတယ်။ တနေ့ဦးဇင်းက တရားတွေဟောပြရင်း ၃၇ မင်းနတ်တွေအကြောင်းရောက်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနတ်တွေဟာ အပါယ်လေးဘုံထဲမှာ […]
တရားဘာကြောင့် ထိုင်ရလဲ? “တရားထိုင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်…
July 11, 2019 Online Bunner 0
“တရားဘာကြောင့် ထိုင်ရလဲ” “တရားထိုင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်” တရားဘာကြောင့် ထိုင်ရလဲ။ တရားထိုင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကို ကမ္မဌာန်းဆရာ ဦးကေသာဦး ရဲ့ တရားစခန်းတစ်ခုမှ ဟောပြောချက်များ ကိုးကားတင်ပြ၍ ကုသိုလ်ပြုပါသည်။ (ခန္ဓာ-၅ပါးတစ်ဦ:) တရားအတွေ့အကြုံ မရှိရင် တရားထိုင်တဲ့ ကိစ္စကို ထူးဆန်းတယ်လို့လဲ ထင်တယ်။ လုပ်ကြံထားတယ်လို့လဲ ထင်တတ်တယ်။ […]